ဒါကFပြီလလူမိုက်တွေဖြစ်တဲ့ BAKE OFF အနိုင်ရသူ PETER ကအိမ်လုပ်မုန့်တွေအခမဲ့ပေးနေတယ် - သတင်း
ဒါကFပြီလလူမိုက်တွေဖြစ်တဲ့ Bake Off အနိုင်ရသူ Peter ကအိမ်လုပ်မုန့်တွေအခမဲ့ပေးနေတယ်
Peter Sawkins သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Great ဗြိတိန်မုန့်ဖုတ်ပွဲတွင်အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ၏ Instagram မှတစ်ဆင့်အခမဲ့အိမ်လုပ်မုန့်များကိုဖုတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကြောင် meme မူလအစမှာအော်ဟစ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး
သူ၏ Instagram အကောင့်ရှိဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်ပေတရုသည်မိမိ၏အိမ်လုပ်မုန့်များကိုမေလကုန်အထိသီးခြားစီပေးမည်ဟုနောက်လိုက်များအားပြောကြားခဲ့သည်။ သူကသူ့ Instagram ကိုပုံပြင်ကနေတဆင့်နေ့၏မုန့်ကြေညာခြင်းနှင့်သူတို့ပထမ ဦး ဆုံးအစေခံပထမ ဦး ဆုံးလာကြပြီ။
Kirin McArthur သည် Edinburgh စတုတ္ထနှစ်တွင်ဖြစ်ပြီးအခမဲ့မုန့်ဖုတ်သည့်ပစ္စည်းများကိုပထမဆုံးလက်ခံရရှိသူဖြစ်သည် Edinburgh Tab သူတို့ဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံး tarts တွေပါ။
နာတာရိန်းနှင့်သရက်သီး tarts - ပေတရုကိုယ်တိုင်ဖုတ်သည်
သင်အချို့ကိုလိုချင်ပါကသင် Instagram ကိုသိမ်းဆည်းရန်သူ၏ Instagram ဇာတ်လမ်းကိုအကြောင်းပြန်ပြီးသင်အောင်မြင်မှုရှိပါကအတည်ပြုရန်အဖြေတစ်ခုကိုစောင့်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏မုန့်ဖုတ်ထားသောပစ္စည်းများကိုပီတာ (သို့မဟုတ်သူ၏ကူညီသူတစ် ဦး) မှဂျော့ခ်ျရင်ပြင်သို့မဟုတ်မတ်စမွန်ဒေသမှကောက်ယူသည်။
သို့သော်၊ သင်သည်မြန်ရမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ပေးကမ်းမှုစတင်ပြီးနောက် မှစ၍ ကိတ်မုန့်အားလုံးကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြိုတင်မှာယူထားသည်။
သူသည်မုန့်များကိုအခမဲ့ပေးနေသော်လည်းပေတရုသည် CALM သို့လှူဒါန်းရန်သူ၏နောက်လိုက်များကိုသူတို့ကိတ်မုန့်ရသည်ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေအားပေးနေသည်။
သူသည်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Edinburgh မာရသွန်ပြေးပွဲတွင်သူဌေးတစ် ဦး တည်းအတွက်ငွေရှာဖွေရန်ကြေငြာခဲ့သည်။ သူသည်ယခုလကုန်တွင် virtual မာရသွန်ပြေးပွဲကိုသူ၏သူငယ်ချင်းသုံး ဦး ဖြစ်သော Jonny Elsdon၊ Joshua Wong နှင့် Jamie Donache တို့နှင့်အတူ Edinburgh တွင်ကျောင်းသားများနှင့်အတူတက်ရောက်နေဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော်သူသည်ဤမုန့်ဖုတ်စွမ်းရည်ကို သုံး၍ ဤအရေးကြီးသောကိစ္စအတွက်ငွေများများများရရန်သူတတ်နိုင်သည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။
ပုံရိပ်ခရက်ဒစ်များ - @peter_bakes
ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်စာရင်းကိုင်နှင့်ဘဏ္studentာရေးကျောင်းသားကပရိသတ်များအားဤသို့ပြောကြားခဲ့သည် - မေလကုန်မှာသူငယ်ချင်းများနှင့်ကျွန်တော်ဟာ Edinburgh Virtual မာရသွန်ပြေးပွဲကိုဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခြင်းဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံလိမ့်မည်။ ငါပြေးရတာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကိတ်မုန့်ဖုတ်ရတာပိုကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကဘာလို့ပိုက်ဆံရှာကြတာလဲ၊ CALM ရဲ့စိတ်ကူးအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့ကိတ်မုန့်ကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့်ယခုမှမေလကုန်အထိမာရသွန်ပြေးချိန်အထိ၊ ငါဟာ Instagram ပုံပြင်တွေထဲကအိမ်တစ်လုံးရှာဖို့လိုအပ်တဲ့မုန့်ဖုတ်ကိုမျှဝေမယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Edinburgh တွင်နေထိုင်ပြီးဂျော့ခ်ျရင်ပြင်အနီးရှိလမ်းသို့သွားနိုင်လျှင်ငါ့ကို DM ပို့ပါ။ မုန့်ဖုတ်ကိုဘေးကင်းစွာလွှဲပြောင်းပေးရန်ပထမ ဦး ဆုံးဖြေကြားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်စီစဉ်ပါလိမ့်မည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့ insta ဇီဝနှင့်ဆက်စပ်သောရဲ့ရုံပေးခြင်းစာမျက်နှာမှတဆင့်သင်အေးဆေးမှလှူဒါန်းရန်တောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့အက်ဒ်ဘာ့ဂ်ရှေးရှေး၊ ငါ့ပုံပြင်တွေကိုမျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပါ၊ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းတဲ့ငွေအချို့ကိုစုဆောင်းပြီးအရသာရှိတဲ့ကိတ်မုန့်များစွာကိုမျှဝေသုံးစွဲလိမ့်မယ်။
Edinburgh Tab ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပေတရု၏မုန့်အချို့ရဖို့စီမံခန့်ခွဲသူကိုပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး မှမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ အက်စ်ဘာ့ဂ်၌လေးနှစ်မြောက် Kirsty သည်ကံကောင်းခြင်း၊ ကျား၊ သမင်နှင့်ဗာဒံတောင့်များအပြင်သရက်သီးနှင့်အုန်းသီးအခွံများရရန်လုံလောက်သည်။
သူမသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့သည်: ငါသည်ငါ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနိုင်မစဉ်းစားပါ! စင်ကြယ်သောအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ငါသူပထမ ဦး ဆုံးပုံပြင်ကိုတင်တစ်ချိန်တည်းမှာငါ Instagram ကိုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကနှစ်မိနစ်အဘို့အတက်ခဲ့ကြောင်းမြင်ငါအားလုံးသွားကြောင်းလိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်ငါအလျင်အမြန်သူ့ကို DMed ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုရတယ်။
ထိုအခါငါ Marchmont အတွက် Leaf နှင့် Bean ကဖေးဘေးတွင်ထောင့်ကိုဆင်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ရသည်။ ငါသူ့ကိုစကားပြောဖို့တယ်ကြောင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပဲ! သူကအားလုံးဘေးဖယ်ထားခဲ့သည်ဒါကြောင့်အလွန်ဘေးကင်းလုံခြုံခဲ့ပါတယ်ကျနော်တို့ထို့နောက်သူသည်ငါတို့ကို pies ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းနည်းသေတ္တာများပေးသောသူအေးဆေးဘို့အပြေးမယ့်မာရသွန်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ချက်တင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူကကိုယ့်ကျောက်မျက်ပဲသူကအရမ်းပျော်ရွှင်စတုတ္ထနှစ်ပေါင်းထွက်တစည်းလုပ်! သူတို့ကလုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်လည်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။
On Aprilပြီ ၁ ရက် , Edinburgh Tab ပီတာသည် Edinburgh Uni နှင့်အတူတကွ ပူးပေါင်း၍ အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုတစ်နှစ်အတွက်မစ်ကိတ်မုန့်ဖုတ်ရန်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည်anပြီလလူမိုက်များဖြစ်သော်လည်းပေတရုသည်အမျိုးသားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအသိပညာအတွက်ငွေကြေးရှာဖွေရန်သူ၏မုန့်ဖုတ်စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတွေ့မြင်ရသည်မှာအလွန်ကောင်းသည်။
သငျသညျအေးဆေးမှုအတွက်ပေတရုရဲ့ရန်ပုံငွေရှာမှလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် ဒီမှာ ။
ပုံရိပ်ခရက်ဒစ်များကိုဖုံးပါ။ @peter_bakes နှင့် Kirsty McArthur
• GBBO ဆုရှင်ပီတာသည် Edi ကျောင်းသားတိုင်းအတွက်အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုတစ်နှစ်အတွက်မယားစကားမုန့်ဖုတ်ရမည်
• Edinburgh တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားတစ်ယောက်သည် Great British Bake Off ကိုရရှိခဲ့သည်
• Bdi Off မှ Peter အမည်ရှိယူနီယာအဆောက်အအုံတစ်ခုရရှိရန် Edi ကျောင်းသားများကအသနားခံစာကိုစတင်ခဲ့သည်